Fantaro ny loko handona ny Huawei P20 amin'ny magazay | Androidsis
Ny Huawei P20 dia ho tonga amin'ireo loko eny an-tsena ireo
Eder Ferreno | | Huawei, About us
Huawei dia iray amin'ireo marika malaza indrindra eny an-tsena, na dia tamin'ny 2017 aza dia tsy nanana ny fahombiazana tadiavina amin'ny avo lenta. Ny Huawei P10 dia tsy voamariky ny tsena. Ka ny marika sinoa dia manantena ny hahita fahombiazana bebe kokoa amin'ny taona 2018 miaraka amin'ny laharana farany avo lenta. Ka endrika vaovao no antenaina hisy ilay vaovao Huawei P20.
Andrasana noho izany ny marika dia manolotra ilay fitaovana ao amin'ny Mobile World Congress 2018 any Barcelona amin'ny faran'ny volana feb. Fantatra tsikelikely ny antsipiriany bebe kokoa momba ity Huawei P20 ity. Anisan'ny pitsopitsony fantatra hatreto ny loko izay hahatratra ny tsena.
Toy ny fanao amin'ny marika sinoa, ny fitaovana dia ho tonga amin'ny kinova telo samihafa amin'ny tsena. Ny Huawei P20, ny P20 Plus ary farany ny P20 Lite. Ka hanan-javatra betsaka hisafidianana ny mpampiasa. Azo antoka fa hisy modely handresy lahatra azy ireo mihoatra ny iray hafa.
ankehitriny, Ny loko izay ahatongavan'ny kinova telo an'ny haavo Huawei ho an'ny tsena. Inona no azontsika antenaina amin'ny telefaona vaovao avy amin'ny marika sinoa malaza?
Huawei P20: Mainty sy takariva ny keramika
P20 Plus: Mainty sy takariva ny keramika
Huawei P20 Lite: Mamatonalina Mainty, Klein Blue ary Sakura Pink
Mazava izany fa ireo maodely roa farany dia tsy hanolotra safidy be loatra amin'ny resaka loko. Raha manolotra loko telo samihafa ho antsika ny kinova mora azo kokoa. Ireo no voamarina hatreto. Mety hisy loko vaovao amin'ny ho avy.
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miandry isika hijery ity maodely ity amin'ny MWC 2018. Tsy misy isalasalana, ny fiandrasana dia efa tena fohy, ka afaka herinandro vitsivitsy dia ho fantatsika ny antsipiriany rehetra momba ny Huawei P20. Ho hitantsika raha manana vintana bebe kokoa amin'ny marika farany ity ny marika sinoa amin'ity taona 2018 ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei P20 dia ho tonga amin'ireo loko eny an-tsena ireo
Ny Samsung Galaxy S9 dia mety ho tonga any Eropa amin'ny kinova SIM roa
Ny lalao fanatanjahan-tena amin'ny ririnina tsara indrindra ho an'ny Android